Imizobo epholileyo enemigca elula kunye nemibono ngombono ukusuka kwizixhobo zombala - Scantegrity
Imizobo epholileyo enemigca elula kunye nemibono ngombono ukusuka kwizixhobo zombala
Umhlaba ngaphandle kobugcisa ngu-eh!, Kunye nokupeyinta yenye yeendlela endizithandayo. Nonke niyazi ukuba elona candelo linzima ukupenda kukuqala. Kule meko, unokufuna ukufumana imizobo epholileyo okanye imizobo elula yokupeyinta ukuqala. Kulungile, kulungile ukuba uphonononga inqwaba yemizobo emnandi enokuba zizimvo ezilungileyo kumzobo wakho olandelayo. Uyabona, kukho inqwaba yendlela yokupeyinta onokuyisebenzisa. Ungayichazanga, kulungile ukufaka umzobo nge-twist.
Ngokucacileyo, eli nqaku liza kukubonisa inqwaba yemizobo e-tumblr esuka kwimizobo epholileyo iye kwelula. Ngokuqinisekileyo, ungazisebenzisa nakwezinye iziseko zokudweba. Ewe, ukupenda kufana nokuthatha ifoto. Zombini zineenjongo ezifanayo ezokwenza umfanekiso okwazi ukubalisa ibali. Unokwenza ibali kwi-canvas mntu okanye nakwifani enombono.
Yintoni oyaziyo malunga nokupeyinta?
Ewe, ukupeyinta yinxalenye yobugcisa. Xa usiva malunga nokupeyinta, kufuneka ukhumbule ukuxubha, iipende, isitshixo sepende, isiponji, kunye nebrashi yomoya. Ewe kunjalo, ukupeyinta sisiphumo sesenzo kunye nokupeyinta yinto.
Akukho dout, ungatsho ukuba ukupeyinta kuthathwa njengobugcisa njengoko bunxulumene nefom yabo kunendlela yayo okanye indlela yobugcisa. Ewe, ubugcisa begrafiti kunye nokupeyinta kweoyile zimbini iintlobo zokupeyinta. Uyabona, ukupeyinta kwe-arcylic bubuso beli xesha bobugcisa bokupeyinta. Ke, ukuba ufuna ukwenza into yanamhlanje, i-acrylic tehnique kungcono ukuyifaka.
Zeziphi iindlela ezingama-32 zokupeyinta iThcnique?
Imbonakalo yomoya ohamba emoyeni
Kwaye, zithini iiSitayile sokupeyinta?
Ngolwazi, zimbini iintlobo zezitayile zokupeyinta ekufuneka uyazi. Ifashoni yisitayile yasentshona kwaye eyesibini isitayile sasempuma. Iifashthi zakho zonke, nolu uluhlu lwezitayile zasentshona ekupeyinteni:
Umzobo wobugcisa bomzekeliso / ubugcisa
I-Art Deco – ubugcisa obubonwayo, uyilo kunye noyilo
IArt Nouveau-iphefumlelwe yindalo
Ngeli xesha, izitayela ze-easter zepeyinti zezi:
Imizobo yaseIndiya: Tanjore, Mughal, Rajasthani nase Pattachitra
Sebenzisa umbala wesikhenkcisi ukuze ufumane ukuvela kombala
Bangaphi kuni abanokuphazamiseka ekusebenziseni imibala efanayo kwipeyinti yakho? Ewe, unokufuna ukwazi ukuba umntu okhetha imibala unokukunika ngaphezulu kwe-1.8 yezigidi zemibono yemibala. Ndiyathetha, xa ubona umfanekiso, unokufumana umbala ofuna ukuwusebenzisa kumzobo wakho. Kodwa, kwenzeka ntoni ukuba awukwazi kumbala umbala ofuna ukuwusebenzisa? Uya kudideka!
Ngokucacileyo, ukuba usebenzisa umnyangi wemibala, uya kulwazi uluhlu lwemifanekiso engaphakathi komfanekiso, umfanekiso, okanye ifoto. Ngolwazi, isixhobo kulula ukusisebenzisa kwaye siya kuchitha malunga nomzuzu omnye. Kuya kufuneka ulungiselele umfanekiso ofuna ukuwuhlalutya umbala kwaye uya kufumana iinkcukacha zomfanekiso. Olunye ulwazi onokulufumana igama lombala, i-RGB, kunye ne-HEX ngokunjalo. Esi sisixhobo esihle, akunjalo?
Uyisebenzisa njani i-color Picker?
Kubonakala ngathi awunakulinda ukusebenzisa isikhethi sombala. Ke, ngaphandle kokuqhubeka ngenxa, unokukhangela amanyathelo alandelelanayo ukusebenzisa isikhethi umbala. Nako sisiya!
Inyathelo loku-1: Fumana umfanekiso, umfanekiso, okanye ifoto kwisixhobo sakho
Into yokuqala kuqala, kufuneka ufumane umfanekiso, umfanekiso, okanye into oyibiza njengefoto kwisixhobo sakho. Ngokuqinisekileyo, unokuyikhuphela kwi-intanethi. Ngaphandle koko, unokuyihlola kwakhona kumthombo othile. Ukuba unekhamera, unokuthatha umfanekiso wento ngqo.
Inyathelo 2: Faka umfanekiso, umFanekiso, okanye ifoto kwiZixhobo zePicker
Ukuba uyabona, esi sixhobo silandelayo sikunika indawo yokufaka umfanekiso. Ewe, kufuneka ukhethe umfanekiso ofanelekileyo, umfanekiso, okanye ifoto.
Inyathelo 3: Beka enye inkcazo yoMfanekiso
Emva kokufaka umfanekiso, kuya kufuneka wongeze inkcazo. Ngokucacileyo, kufuneka ufake amagama amane ukugqibezela intsimi.
Inyathelo 4: Cofa iqhosha u- “Ngenisa”
Kwaye, unokucofa kwiqhosha lokungenisa ukuze uqhubekele kwinqanaba elilandelayo.
Inyathelo lesi-5: Vavanya iziphumo zoFumene imibala
Ekugqibeleni! Ungenise umfanekiso. Ngoku, kuya kubakho imibala ethile kwiscreen. Ngokuqinisekileyo, uya kukwazi ukubona ezinye iinkcukacha ezifana ne-HEX, RGB, kunye negama lemibala. Ungawaphindaphinda amanyathelo ngokusebenzisa imifanekiso eyahlukeneyo, imifanekiso, okanye iifoto ukufumana imibala emitsha. Yonwaba!
Uyabona, umfanekiso osilayishile unemibala eyahlukeneyo.
Ngoku, unokufaka imibala kule mibono yakho yokupeyinta.